အာရှတလွှား | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 144
တနေ့မှာ ပြန်လည်ဆုံဆည်းကြဖို့ …ချိန်းဆိုထားခဲ့တဲ့ … အမေနဲ့ သား
တနေ့မှာ ပြန်လည်ဆုံဆည်းကြဖို့ …ချိန်းဆိုထားခဲ့တဲ့ … အမေနဲ့ သား ကမာပုလဲ၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၂ စာမတတ်တဲ့ မိန်းမကြီးက တနေ့ သူ့သား ပြန်လာမှာကို သူသိတယ် ဒါကြောင့် သူမသေခင်ကနေ သေသည်အထိ သူ့သားပြန်လာရင် သားကိုတွေ့နိုင်ဖို့ အုတ်ဂူတလုံးစာ ငွေစုတယ် …။ အဲဒီငွေစ … သူတပါးမျက်ရည်စတွေ မပါဘူး သူ့ချွေးနည်းစာ အိုစာမင်းစာကလေး ဓါတ်စာမစားဘဲ စုခဲ့သတဲ့ …။ အဲဒီ အုတ်ဂူကလေး သူ့ဇာတိမြေမှာ ရှိနေတယ် သူမ ဂူထဲမှာ သူ့သား ပြန်အလာကို စောင့်လို့နေတယ် … သူမရဲ့ သား … လမ်းမမှားပါဘူး (သူမရဲ့ သား … အိမ်ကို သိပ်ပြန်ချင်တာပေါ့) ဒီလို အခင်းအကျင်းပျက်ကြီးနဲ့...
ညက … ရှင်ဒဲလား စာရင်းကို ပြန်လည် ကြည့်ဖြစ်ခြင်း (Kama Pale)
ညက … ရှင်ဒဲလား စာရင်းကို ပြန်လည် ကြည့်ဖြစ်ခြင်း ကမာပုလဲ၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၂ ညက … ရှင်ဒဲလားစာရင်း ကို ပြန်ကြည့်ဖြစ်တယ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို တီဗွီဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ ပြန်လည်ကြည့်ရှု ခံစားခွင့်ရရှိခြင်း ဆေးရောင်စုံ မဟုတ်၊ အဖြူအမည်း ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် အဖြစ်အပျက် မော်ကွန်းရုပ်ရှင် ကြည့်နေရသလိုပဲ …။ ဂျာမန်ဗိုလ်က နံနက်အိပ်ယာအထမှာ ၀ါးရံတာထွက် စီးကရက်ဖွာတယ် စနိုက်ဖါ သေနတ်တလက်နဲ့ ခိုက်ခိုက်တုန် နှင်းထူထူထဲ အလုပ်ကြမ်း လုပ်ပေးနေရတဲ့ ဂျူးသုံ့ပန်းတွေကို အပြင်းပြေ ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်တယ် ပြီးမှ ရေအိမ်ထဲဝင် အပေါ့အပါးသွားတယ်။ ဂျာမန်ဗိုလ်တွေအတွက် သုံ့ပန်းတွေကို သတ်ဖြတ်ရတဲ့ အလုပ်ဟာ ထမင်းစား၊ ရေသောက်တာကမှ ခက်ကောင်း ခက်နေပါဦးမယ်...
ခင်မြဇင်ရဲ့ ၀တ္ထုတိုတပုဒ် … လူသား … သံယောဇဉ် … နာကျည်းမှု
ခင်မြဇင်ရဲ့ ၀တ္ထုတိုတပုဒ် … လူသား … သံယောဇဉ် … နာကျည်းမှု ကမာပုလဲ၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၂ “သားကလေးဟာ သိပ်ကို ဖြူစင်သန့်ရှင်းတဲ့ လူသား ကလေးငယ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ် …ခုတော့ သူ့မျက်နှာလေးမှာ မုန်းတီးနာကျည်းမှုရဲ့ အရိပ်တွေ အခိုင်အမာစွန်းထင်းနေခဲ့ပြီ … အင်း သားကလေးလို အဟိတ်တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့ခွေးကလေးအပေါ်မှာ ထားရှိနေတဲ့ သံယောဇဉ်ကတောင် ခုလိုခံစားဖေါ်ပြနေပါလျှင် …..” ဒီနေ့ ရုံးမှာမွေးထားတဲ့ ကြောင်ကလေး ခွေးကိုက်ခံရလို့ သေသွားတယ် … သူတို့ကိုမွေးတာ နှစ်လလောက်ပဲ ရှိသေးတယ် … လေးကောင်မွေးတယ် … တယေက်က ကြောင်ပေါက်စန နီတာရဲကလေးတွေကို ကြည့်ပြီး အမလေးတွေတဲ့ … သူက အမတွေချည်းဆိုတော့အားလုံကလဲ အမတွေချည်းပဲ မှတ်ထားလိုက်တာပေါ့ … တလကျော်လောက်နေတော့စပ်စပ်စုစုလုပ်ရာကနေ...
ကာတွန်း အိုကေလင်း – မြန်မာပြည်က ကွန်မြူနစ်လက်သစ်တွေကို ချေမှုန်းကြ
ကာတွန်း အိုကေလင်း – မြန်မာပြည်က ကွန်မြူနစ်လက်သစ်တွေကို ချေမှုန်းကြ ဒီဇင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၂ No tags for this post.
ကာတွန်းအိုကေလင်း – ပြည်သူတွေက ဆင်းရဲပြီး၊ တိုင်းပြည်က ချမ်းသာတယ်ဆိုတာ ဒီလိုပါ …
ကာတွန်းအိုကေလင်း – ပြည်သူတွေက ဆင်းရဲပြီး၊ တိုင်းပြည်က ချမ်းသာတယ်ဆိုတာ ဒီလိုပါ … ဒီဇင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၂ No tags for this post.
ချွေးစက် … လက်ဆောင် – Kamar Pale
ချွေးစက် … လက်ဆောင် ကမာပုလဲ၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၂ ဘ၀ ယဇ်ပလ္လင်ထက်မှာ ကြိတ်ပြီးကျခဲ့ရတဲ့ မျက်ရည်စများ …။ ကျောက်စိမ်းစားပွဲပေါ်က ရွှေပန်းကန်ထက် တစက်စက်နဲ့ ကြေကွဲမျက်ရည် …။ သနားတယ်မောင် အဲဒီမျက်ရည် … အပြစ်မဲ့သွေးတို့ စွန်းထင်းတယ်။ နေပူစပ်ခါး … စက်ရုံအလုပ်ရုံရနံ့ ပါးကွက်ကြားပေါ် ဖြတ်စီးလာတဲ့မြစ်များ ခင့်နဖူးပေါ်မှ မြစ်ဖျားခံခဲ့တဲ့ အလွမ်းတွေ … လေညင်းကနေ … ပို့လိုက်တယ်။ ။ ၅၊ ၁၂၊ ၂၀၁၂ (Illustration credit to http://www.myspace.com/marylestlost/blog ) No tags for this post.
ဗီယက်နမ်သို့ အလုပ်သွားလုပ်ခြင်း နှင့် ဆောင်းပါးများ ကောက်နုတ်ချက် (Zaw Aung (Monywa))
ဇော်အောင် (မုံရွာ)၊ ဒီဇင်ဘာ ၉ ၊ ၂၀၁၂ မော်တော်ဆိုင်ကယ်မစီးတတ်လျှင် မဖြစ်သည့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ Only In Vietnam ဓါတ်ပုံများဖြင့် စတင်ပါမည်။ ယခုဓါတ်ပုံများကို သင်မြင်သောအခါ ရယ်စရာဖြစ်နေပေမည် (သို့မဟုတ်) သြော်..ဟု တမ်းတပြီး မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်ပေမည်။ ဗီယက်နမ်တွင် ထိုကဲ့သို့မြင်ကွင်းများမှာ ဘယ်သူမှ ဂရုမစိုက်ပါ။ သက်သက်သာသာပင် မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဖြင့် လုပ်ကိုင်စားသောက်နေကြပါသည်။ သက်သက်သာသာပင် မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဖြင့် အဖေ၊အမေ၊သား၊သမီး ..တစီးတည်း ပြွတ်ကျပ်စီးနင်း၊ ခရီးသွားနေကြသည်မှာ လမ်းပေါ်တက်သည်နှင့် နေ့စဉ်ဓူဝ မြင်တွေ့နေကျဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်တွင် တချိန် အနှေးနှင့်အမြန် ဗီယက်နမ်ကဲ့သို့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဖြစ်သည်။ မိတ်ဆွေ.. ထိုင်း၊မလေးရှား၊စင်ကာပူ၊ကိုးရီးယား၊ဂျပန်၊အမေရိကန် ..စသဖြင့် မိမိရောက်ဖူးသော နိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်က မြန်မာပြည်ကို ထိုတိုးတက်သော နိုင်ငံအဆင့်သို့ ရောက်စေချင်လှပေမည်။ ငါတို့...
မြေကမ္ဘာဟာ ….ငါတို့ဖြစ်တယ် (Kama Pale)
မြေကမ္ဘာဟာ ….ငါတို့ဖြစ်တယ် ကမာပုလဲ၊ ဒီဇင်ဘာ ၉ ၊ ၂၀၁၂ မနေ့ကတော့ ပန်းကလေးတွေက ဝေကာဆာကာ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ဆံမြိတ်ချ မိန်းမလှချင်းတောင် မနာလိုချင်စရာ ငေးနေကြရပုံများနှယ်….။ မာနတွေလည်း မကြီးခဲ့ပါဘူး ချစ်ချင်းတွေကိုလည်း မတွန့်တိုခဲ့ဘူး ပေးဆပ်ကုစားလိုတဲ့ စရဏတရား နိမ့်ပါးသူတွေအပေါ်မှာ …. ချစ်တတ်ကြသူချင်းသာ အသိဆုံးလေ။ သည်လို… မနက်ခင်းရဲ့ မျက်နှာမျိုးတွေနဲ့ တခါက အလှတွေ ပျက်နေ စီးနေ လိုက်ပုံများ အိုဘယ့် …. မတွေးရက် မမြင်ရက် မရှုရက်နိုင်စရာတွေသာ….။ မြေနိမ့်ရာ လှံစိုက်သတဲ့လား ဒီလိုသာ လွယ်လွယ်အရှုံးပေးနေတတ်ရင် ဘ၀က သင့်ကို သရော်လိမ့်မယ် ကြယ်တွေကြွေတာ မဆန်းပါဘူး အရေးကြီးတာက မဖေါက်မပြန် … လွမ်းရဲဖို့ ။ ။ No...
ကာတွန်း အိုကေလင်း – အဆင့်ရှိတဲ့ နှိမ်နှင်းနည်း
ကာတွန်း အိုကေလင်း – အဆင့်ရှိတဲ့ နှိမ်နှင်းနည်း ဒီဇင်ဘာ ၈၊ ၂၀၁၂ No tags for this post.
ထိုင်း PTT နဲ့ မြန်မာ့ရေနံ၊ ဓါတ်ငွေ့ ဘာလဲ၊ ဘယ်လဲ ဇော်အောင် (မုံရွာ)၊ ဒီဇင်ဘာ ၇၊ ၂၀၁၂ Petroleum AuThority of Thailand ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရပိုင် ရေနံကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။ Fortune 500 မှာတော့ ကမ္ဘာ့အဆင့် ပိုင်ဆိုင်မှု ၇၉.၆ဘီလျှံနဲ့ ကမ္ဘာ့မှာ အဆင့် ၉၅၊ ၂၀၁၂မှာ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အထူး ပတ်သက်နဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်ပြီး၊ မြန်မာကမ်းလွန် (ရတနာဓါတ်ငွေ့) ပိုက်လိုင်းအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် နိုင်ငံခြားငွေ အမြောက်အများ စတင်ရရှိစေတဲ့ ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်းမှာလည်း ပါဝင်ပတ်သက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမှာ ထိုင်းနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဟာ နောက်ကွယ်က အကြီးမားဆုံး ရင်းနှီးမြှတ်နှံမဲ့ နိုင်ငံဖြစ်နေပါတယ်။ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့ အကြီးမားဆုံး ရေနံချက်စက်ရုံ $28.7...
Page 144 of 153«1...142143144145146...153»
ဗိုလ်ထက်မင်း - ကိုးကန့် MNDAAစခန်းတွေကို တိုက်ပြီးရင် ဘာဆက်လုပ်ကြမှာလဲ ? အပိုင်း(၂)
မောင်တူး - နှစ် သုံးဆယ်
ဇင်လင်း ● တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ဖေါ်ဆောင်ရမည့်သူများကိုယ်တိုင် အဂတိလိုက်စားမှုများ ကျူးလွန်နေသလား
ရဲရင့်သက်ဇွဲ ● သိသလိုလို မသိသလိုလို
ကိုသန်းလွင် - ခြစားမှုတိုက်ဖျက်ရာဝယ်
ကိုသန်းလွင် - ဗုဒ္ဓဂါယာ
တူမောင်ညို - လူထုဆန္ဒကို လူထုအင်အားဖြင့်သာ ဖော်ဆောင်နိုင်မည်
မောင်လူရေး – ဇိတ်ဇလီ https://t.co/zHcv3jSMcb https://t.co/OCCBfyJzoy about 13 hours ago ReplyRetweetFavorite
ကာတွန်းရွှေဗိုလ်ရဲ့ တိုးရင် … တက်မယ် … https://t.co/x5whrRygFz https://t.co/XUNg4BbbP7 about 13 hours ago ReplyRetweetFavorite
မောင်အောင်မွန် ● ကျွန်တော်တွေးမိသလိုရေးပါမည် (၃၃၂) https://t.co/ShRs692lHF https://t.co/c1q1ahBuBX about 13 hours ago ReplyRetweetFavorite
ကာတွန်း မောင်ရစ် – ရွှေမိနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ – You can say that again! https://t.co/42GaPxqMIu https://t.co/VzjKwLcafB about 14 hours ago ReplyRetweetFavorite